Niantso An’i Samoela Andriamanitra | Tantara ao Amin’ny Baiboly
Nanana zanaka roa lahy i Ely Mpisoronabe. Hofinia sy Finehasa no anarany, ary mpisorona tao amin’ny tranolay masina ry zareo. Tsy niraharaha ny lalàn’i Jehovah anefa ry zareo sady ratsy toetra be. Nalain-dry zareo, ohatra, ny hena tsara indrindra, rehefa nanao sorona biby ho an’i Jehovah ny Israelita. Fantatr’i Ely ny zava-dratsy nataon’izy roa lahy, nefa tsy nibedy an-dry zareo izy. Faly tamin’izany ve i Jehovah?
Efa lehibe i Hofinia sy Finehasa, fa i Samoela kosa mbola kely. Tsy nanao hoatran’izy roa lahy anefa i Samoela ka faly i Jehovah. Rehefa natory izy indray alina izay, dia nisy niantso. Nifoha izy ka nihazakazaka nankany amin’i Ely sady niteny hoe: ‘Ahoana tompoko?’ Dia hoy i Ely: ‘Tsy niantso anao aho ka. Mandehana miverina matory.’ Dia lasa natory i Samoela nefa mbola nisy niantso fanindroany, dia avy eo fanintelony. Fantatr’i Ely amin’izay àry hoe i Jehovah ilay niantso. Dia hoy izy tamin’i Samoela: ‘Raha mbola misy miantso ianao, dia ataovy hoe: Mitenena Jehovah fa mihaino anao aho.’
Niverina natory i Samoela. Nisy niantso indray izy hoe: ‘Samoela! Samoela!’ Dia hoy izy: ‘Mitenena fa mihaino anao aho.’ Hoy i Jehovah taminy: ‘Teneno i Ely hoe hosaziko izy sy ny fianakaviany. Efa fantany fa ratsy ny ataon’ny zanany lahy ato amin’ny tranolay masina, nefa izy tsy mibedy an-dry zareo akory.’ Ny ampitso maraina, dia nanokatra ny varavaran’ny tranolay masina hoatran’ny mahazatra i Samoela. Tsy sahy niresaka tamin’i Ely ny zavatra notenenin’i Jehovah anefa izy. Dia hoy i Ely taminy: ‘Inona no notenenin’i Jehovah taminao, anaka? Lazao daholo fa aza misy afenina.’ Dia notenenin’i Samoela taminy ilay izy.
Rehefa nihalehibe i Samoela, dia nanampy azy foana i Jehovah. Lasa fantatry ny olona rehetra tany Israely fa i Samoela no nofidin’i Jehovah ho mpaminany sy mpitsara.
“Tsarovy ilay Mpamorona Be Voninahitra nanao anao. Eny, tsarovy izy amin’ny andro fahatanoranao.” —Mpitoriteny 12:1
Fanontaniana: Nanao hoatran’i Hofinia sy Finehasa ve i Samoela? Inona no notenenin’i Jehovah tamin’i Samoela?
1 Samoela 2:12-17, 22-26; 3:1-21; 7:6
Tao Amin’ny Tempoly i Samoela
Ahoana no nitahian’i Jehovah an’i Samoela? Ataovy pirinty ity kilalaon-tsary ity, ampifandraiso ireo teboka, ary vakio ilay tantara ara-baiboly.
Nanao ny Tsara Foana i Samoela
Ahoana no atao raha te hanao ny tsara foana hoatran’i Samoela, na dia manao ratsy aza ny olon-kafa?
Karatra Ara-baiboly: Samoela
Mbola kely i Samoela dia efa nanompo an’Andriamanitra. Ahoana no azonao anahafana azy?
Nifidy ny Hanompo An’i Jehovah i Samoela
Nahita mpisorona nanao ratsy i Samoela. Inona no nanampy azy hifidy hanompo an’i Jehovah na dia nanao ratsy aza ny olon-kafa?
Nanompo An’i Jehovah Foana i Samoela
Nahoana ny fahazazan’i Samoela no tsy mitovy amin’ny an’ny ankizy rehetra? Inona no nampitombo ny finoany tamin’izy tany amin’ny tranolay?
Iza no Nifidy Hanompo An’i Jehovah?
Hanampy ny ankizy 6 ka hatramin’ny 8 taona hamantatra ny olona ao amin’ny Baiboly ity kilalao ity.